Indlela i-Airbnb ebakhusela ngayo ababuki zindwendwe
Sithathe amanyathelo athe xhaxhe okukunceda ukuze ikhaya lakho, kunye neendwendwe zakho zikhuseleke.
Yiba neendwendwe ezisemagqabini
Akakho oqhathekayo-omnye ujonga ingxelo yomnye
Ukuze kubekho ukuthembana kuze kugcinwe negama elihle le-Airbnb, iindwendwe kunye nababuki zindwendwe babhala iingxelo omnye ngomnye qho emva kokuba bekubhukishiwe. Ngaphambi kokwamkela undwendwe, unokujonga iingxelo abazibhalileyo ngalo abanye ababuki zindwendwe.
Ukunxibelelana ngokulula kunye neendwendwe
Ukuba ufuna ukubuza iindwendwe imibuzo okanye ukuzazisa ngoko kulindelekileyo ngaphambi kokuba zifike, ungakwenza oko ngokuthi usebenzise isixhobo sethu semiyalezo esikhuselekileyo.
Unokufuna ukuba zonke iindwendwe zinikezele isazisi kwi-Airbnb ngaphambi kokubhukisha. Uya kufumana nethuba lokujonga abantu ababhukishileyo ngaphambi kwexesha okanye wongeze imiqathango yokuba ngoobani abanokubhukisha. Ngaphezu koko, bonke abantu ababhukisha ngo-Airbnb bayahlolwa ukuba abayongozi na, kwaye siyakurhoxisa nakuphi na ukubhukisha okubonakala kukrokreleka.
Ukukunceda ngoko ukulindeleyo, unokubeka iMithetho yeNdlu ekufuneka iindwendwe zivumelane nayo ngaphambi kokuba zibhukishe, umzekelo into yokuba akutshaywa namatheko awafuneki. Ukuba undwendwe lwaphula omnye wale mithetho emva kokuba lubhukishile, unokukurhoxisa ukubhukisha kwalo.
Anjani amaxabiso ethu xa uwathelekisa?
Imali ekhutshwa ngumbuki zindwendwe (ngokubhukisha)
Kusoloko kumahala ukufaka indawo yakho
Akukho mali ibhatalwayo ngokuthenga ngekhadi lekhredithi
I$1M ngeyokukhusela xa kunokubakho umonakalo kwindlu
Yagqibela ukuhlaziywa ngoJune 2018
Ndifumanise ukuba aba bantu balungile. Ndingabathemba aba bantu.
Milaida ungumbuki zindwendwe ePuerto Rico ukuze enze imali engakumbi.
Yamkela iindwendwe ngokuzithemba
Imali eyi-$1,000,000 yokuhlawulela umonakalo ezindlwini
Kwimeko enqabileyo yomonakalo wepropathi, i-Airbnb iqinisekisa ngokubuyisela isixa esifikelela kwi-$1,000,000 ngendlu nganye ebhukishwayo, ngalo lonke ixesha. Isicelo sinokufakwa ngokuthe ngqo kwiZiko Lezemali.
Funda okungakumbi Ngesiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo se-Airbnb
I-inshorensi yokuhlawulela iingozi
I-Airbnb ineInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo ekhupha ukufikelela kwi-$1,000,000 xa kukho umonakalo owenzekileyo. Le inshorensi yeyeziganeko ezingafane zenzeke zokumangalelwa ngumntu ngenxa yokonzakala emzimbeni okanye ukonakaliswa kwento yakhe ngexesha ebehleli endlwini ye-Airbnb.
Funda okungakumbi ngeInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo
Kusebenza ngokuzenzekelayo kwindlu nganye ebhukishwayo
Izikhalazo zingafakwa ngokuthe ngqo kwi-Airbnb
Silapha imini nobusuku
Into elinokukwenzela yona iqela lethu
Iqela lethu likulungele ukukuxhasa imini nobusuku ngefowuni, i-imeyile nangokubhalelana imiyalezo.
Uncedo lokubhukisha kwakhona
Isiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo nezicelo zeinshorensi
Abahambi bathathe uhambo kangangezigidi eziyi-49 nge-Airbnb ngo-2017. Yindlu eyi-1 kuphela kweziyi-25 000 ekubikwe ukuba iye yonakaliswa kakhulu.
Yintoni efunekayo kwiindwendwe ngaphambi kokubhukisha?
Sicela wonke umntu osebenzisa i-Airbnb asinike iinkcukacha ezimbalwa ngaphambi kokuba abhukishe uhambo. Iindwendwe kufuneka ziyifake yonke le nkcazelo ngaphambi kokuba zenze izicelo zokubhukisha. Le nkcazelo ikunceda uqiniseke ukuba lundwendwe olunjani onokululindela, kunye nendlela yokunxibelelana nalo.
Izinto ezifunwa yi-Airbnb kwiindwendwe ziquka: • Igama elipheleleyo • Idilesi yeimeyile • Inombolo yefowuni eqinisekisiweyo • Umyalezo wokuzazisa Ukuvumelana neMithetho Yekhaya lakho Iinkcukacha zokubhatala
Kulindeleke ukuba iindwendwe zibe nefoto yazo kwiinkcukacha zazo, kodwa akunyanzelekanga. Usenokufuna ukuba iindwendwe zikunike isazisi ngaphambi kokuba zibhukishe indawo yakho.
Ukubhalwa kweengxelo kusebenza njani?
Zonke iingxelo ze-Airbnb zibhalwa ngababuki zindwendwe kunye nabahambi abasuka ekuhlaleni, ngoko nayiphi ingxelo oyibonayo ibhalwe lundwendwe obeluhleli endlwini yakho. Uneentsuku eziyi-14 emva kokuphuma zokuba ubhale ingxelo ngokuhlala kwakho kwaye ungayilungisa ingxelo yakho ukuya kwiiyure eziyi-48 emva kokuba uyingenisile, ngaphandle kokuba umbuki zindwendwe wakho uye wagqiba ukubhala eyakhe ingxelo. Ukuba nobabini nizigqibile iingxelo zenu, okanye kugqitha iintsuku eziyi-14, ezo ngxelo ziboniswa wonke umntu. Ungayifumana nanini na ingxelo ebhalwe ziindwendwe kanti naxa undwendwe lubhukisha, ungazihlola iingxelo abazibhalileyo ngabo ababuki zindwendwe bangaphambili.
Ndimele ndenze ntoni xa undwendwe lusophula into kwindawo yam?
Ukuba kukho into eyophulwe lundwendwe ibe kufuneka ufake ibango, ungenjenjalo kwisebe Lezemali kwiintsuku eziyi-14 luphumile okanye ngaphambi kokuba kufike olunye undwendwe, noba yeyiphi efika kuqala. Ukuba undwendwe lwakho luyavumelana nemali oyicelileyo, siza kukunika imali oyibhatelweyo kwiintsuku zoshishino eziyi-5-7. Ukuba undwendwe lwakho aluyamkeli okanye kudlula iiyure eziyi-72 lungekaphenduli, ungamfaka u-Airbnb kulo meko. Ukuba sicela amanye amaxwebhu, uza kuba neeyure eziyi-72 zokusithumelela loo maxwebhu. Uninzi lwamabango enziwa kwisithuba seveki enye. Siza kuqinisekisa ukuba wena nondwendwe lwakho nimelwa ngokufanelekileyo, ibe xa ufunyaniswe utyalwa imali, siza kukubhatala yona ecaleni.
Ndimele ndenze ntoni xa ndiziva ndingakhululekanga ukwamkela umntu?
Ukuba undwendwe lwaphula enye yeMithetho Yekhaya oyibekileyo okanye lwakwenza waziva ungakhuselekanga ngezenzo zalo, unokusala isicelo salo sokubhukisha okanye usirhoxise. Ngaphambi kokuba wamkele isicelo sokubhukisha Unako ukusirhoxisa, kwaye loo nto ayizukukuphazamisa ukuvela kwendlu yakho kwiziphumo zophando. Ukuba urhoxisa izicelo ezininzi zokubhukisha, loo nto inganegalelo elibi ekuveleni kwendlu yakho kwiziphumo zophando. Emva kokuba wamkele ukubhukisha Ukuba sele ukwamkele ukubhukisha, unako ukukurhoxisa. Usenokufumana isohlwayo sokurhoxisa ukuba undwendwe khange lwaphule nayiphi na iMithetho Yekhaya.
Yintoni umahluko phakathi kweSiqinisekiso Sokubuyiselwa Okulahlekileyo kunye neInshorensi Yokukhusela Umnikazi Wendawo Zakwa-Airbnb?